2019-09-29 | Job Vacancy in Myanmar
2019-09-29 20:04:16 , Plz admin #လုပ်ငန်းခွင်လက်တေ…
Plz admin 🙏🙏🙏
#လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့အသုံးချ ပညာဒါန Certificate သင်တန်းများ
#Admin (ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ) လုပ်ငန်း များကို ၀ါသနာပါသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ၊အနာဂါတ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အောင်မြင်သောမန်နေဂျာ ကောင်း များအဖြစ်ရပ်တည်လိုသူများတက်ရောက်သင့်သောသင်တန်း
HR Admin & Office Management
🗓️ 19 Oct 2019 (Sun) Time –4PM –6PM
📆1.5 months( 29,000 Ks)
– 09 764158055 – 09 978902345 ကိုဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-29 by admin.
2019-09-29 13:56:35 , Human Resource Management …
🔺 Certificate တန်းလေးနော် !!🔺
🔴 HR ဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုသူများ၊
🔴 HR Management ပညာရပ်များကို အချိန်တိုအတွင်း လေ့လာသင်ယူပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Professional Diploma လက်မှတ် ရယူလိုသူများ၊
🔴 HR ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ၀င်လိုသူများ၊
🔴 HR ဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်လိုသူများ၊
🔴 HR ဖြင့် အသက်မွေးပြီး၊ ဘ၀အတွက် Career ကို HR တစ်ယောက်အဖြစ် လျောက်လှမ်းဖို့ စတင်ချင်သူများ၊
🔴 လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဦးဆောင်နေရသူများ၊
🔴 လုပ်ငန်းခွင်သို့ စတင်ဝင်ရောက်မည့်သူများ၊
🔴 ရုံးတစ်ရုံးမှာ ဦးဆောင်ဖို့ စီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုအပ်သော Skill များကို လေ့လာသိရှိချင်သူများ၊
မဖြစ်မနေ တက်ရောက်သင့်တဲ့ အတန်းပါ ။
🎓🔴 သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ် (Certificate) ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 🔴🎓
📆 သင်တန်းကာလ 📆
ေ​အာက်တို​ဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့ထိ (၅ ရက်)
⏰ သင်တန်းချိန် ⏰
ညနေ ၆ နာရီမှ ၈ နာရီ အထိ
💼 သင်တန်းကြေး 💼
📣📣 Special Discount 📣📣
10.10.2019 အတွင်း လာ​ရောက်​အပ်​နှံသူ 10% Off
(၅)​ဦးအပ်​ + (၁)​ဦး အခမဲ့
💢 ပါဝင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုများ 💢
💠 Aircon ခန်းထဲတွင် ​​တစ်ဦးခြင်း ဂရုတစိုက် သင်ကြား​ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊
💠 Free WiFi
💠 မုန့်၊ ကော်ဖီ၊ အအေး
💠 စာရွက်၊ စာတန်းများ အပြင်
💠 တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပညာရေး၊
💠သင်တန်းတက်ရောက်သူများကို အလုပ်အကိုင် (အခမဲ့) ရှာဖွေပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ရှိပါသည်။
🎯 လူဦးရေကန့်သတ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ကြားပေးမယ့်ဆရာနဲ့ အနီးကပ်ဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိတွင်ရှိနေသော အရည်အသွေးများကို အချိန်တိုအတွင်း ငွေကြေးအကုန်အကျနည်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အမြန်လာရောက်အပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ 🎯
💠 သင်တန်းစုံစမ်းရန် 💠
🍀 White Richmond Business School 🍀
2019-09-29 12:47:03 , စီးပွား​ရေးလဲလုပ်ချင်တယ် ဒါ​ပေ…
စီးပွား​ရေးလဲလုပ်ချင်တယ် ဒါ​ပေမယ့်ဘာစီးပွား​ရေးစလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့သူ​တွေအတွက် Discount ​တွေချထားတုန်း သင်တန်း​လေးအ​ပြေးတတ်လိုက်ရ​အောင် 📞📞
ဘယ်လိုသင်တန်း​လေးလဲဆို​တော့ အချိန်အများကြီးလဲ​ပေးစရာမလို၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွား​ရေးတစ်ခုလဲထူ​ထောင်နိုင်မယ်၊ အချိန်နဲ့အမျှ မိမိရဲ့ဝင်​ငွေလဲတိုးပွားလာမယ်၊ အကျိုးအမြတ်လဲရမယ်၊ လက်ရှိစီးပွား​ရေးရှိ​နေရင်လဲ Secondary business အ​နေနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်
ဒါ့အပြင် အနာဂါတ်မှာလဲ ပိုမိုတိုးတတ်​အား​ကောင်းလာမယ့်
ကမ္ဘာ့​ရွှေနဲ့​ငွေ​ကြေး​ဈေးကွက် (Forex market) ကို
Job Vacancy Announcement Mo… ,2020-04-14 16:50:05
Sales & Marketing ,2020-04-14 16:49:47
20 တနျဘကျဟိုးမောငျးရနျ opt ၃ ဦ… ,2020-04-14 09:37:34
Admin တင်ခွင့်ပြုပါ။ ,2020-04-11 21:20:34
We are hiring finance executi… ,2020-04-11 21:20:07